के मास्क र सेनिटाइजरले कोरोना भाइसरलाई रोक्छ ? Kasthamandap Daily
के मास्क र सेनिटाइजरले कोरोना भाइसरलाई रोक्छ ?
कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को वढ्दो महामारीसँंगै सर्वसाधारणमा त्रास वढेको छ । योसँंगै मानिसहरु थुप्रो मानसिक तनावमा जुझ्दै छन् । यीनैवीच अधिकांशको मनमा उठ्ने प्रश्न हो के मास्क र सेनिटाइजरले कोरोना भाइसरलाई रोक्छ ? के हरके क्षण मास्क र सेनिटाइजरको प्रयोग गर्दा केही बेफाइदा त हुँंदैन ? यो विषयमा कयौं मानिसहरुको ध्यान आकर्षण भएको पाइन्छ ।
मास्क र स्यानिटाइजर प्रयोग गर्नुको फाइदासँंगसँंगै थुप्रै बेफाइदाहरु पनि रहेका छन् । तर भनिन्छ नि मर्नु भन्दा बहुलाउनु जाति । त्यसैगरी मास्क र स्यानिटाइजरको फाइदालाई नजरअन्दान पनि गर्न सकिंदैन ।
हुन त धेरै समयसम्म मास्कको प्रयो गर्नाले शरीरमा अक्सिजनको कमी महशुश हुन्छ र सफोकेशन (श्वास फेर्न गाह्रो ) हुनसक्छ । जति मात्रामा शरीरमा अक्सिनज हुनपर्ने त्यो पुगिराखेको हुँंदैन । मास्कको प्रयोगले थुप्रै छालाको समस्या हुनसक्छ । कसैलाई मास्क लगाउँंदा असजता हुनुका साथै चश्मा लगाउँंदा भने बाफका कारण आँंखा चिलाउने, पिरो हुने जस्ता समस्याहरु पनि आउन सक्छन् । लामो समयसम्म प्रयोग गरको मास्क नधोई लगाएमा थुप्रै रोगहरु निम्तिन सक्ने र फैलिन सक्छ कुरालाई ओझेलमा पार्न सकिंदैन ।
त्यसैकारण माक्सको प्रयोग गर्दा सावधानीपूर्वक प्रयोग गर्नुपर्छ । भीडभाडमा जाँंदा मास्को प्रयोग अनिवार्य हुन्छ भने घरमा एक्लै हुँंदा मास्कको आवश्यकता त्यस्तो हुँदैन ।
अल्कोहल बेस स्यानिटाइजर प्रयोग गर्नुको मुख्य कारण व्याक्टेरिया भाइरसबाट बच्नु हो । स्यानिटाइजरहरुमा अधिकांश एन्टिमाइक्रोवियल गुण भएको हुन्छ । जसले हातमा वा शरीरमा रहेका व्याक्टेरिया र भाइरसलाई मार्ने वा कमजोर बनाउने काम गर्दछ । तर पटकपटक स्यानिटाइजरको प्रयोग गर्दा छाला सुख्खा हुने, हात पोल्ने, इन्फेक्सन हुने जस्ता साइड इफेक्टहरु पनि देखा पर्नुका साथै अल्कोहल पोइजनिंग हुने सम्भावना पनि रहेको पाइन्छ ।
यिनै साइड इफेक्टलाई कम गर्न ६० प्रतिशत इथानोल भएको स्यानिटाइजर प्रयोग गर्नुपर्छ । मिथानल भएको स्यानिटाइजर हानिकारक हुने हुँंदा यसको प्रयोग खासै हुँंदैन । मिथानल शरीरको लागि हानिकारक हुन्छ र छालाबाट एकदम छिटो सोस्ने हुन्छ । जसको कारण छालाको समस्या वढ्छ ।
स्यानिटाइजर प्रयोग गरेपछि सकेसम्म खान अघि हात धुनु पर्छ । जसले गर्दा स्यानिटाइजरमा रहेको केमिकल पखालिन्छ ।
तसर्थ मास्क र स्यानिटाइजरका थुप्रै बेफाइदाहरु भएता पनि यसको प्रयोगले धेरै हदसम्म कोरोना भाइसरको संक्रमणलाई रोक्छ । यसको प्रयोग अहिलेको समयमा जरुरी छ । सर्तकतापूर्वक मास्क र स्यानिटाइजर प्रयोग गर्दा आफू र अरुलाई पनि फाइदाजनक हुन्छ ।
(लेखिका वी फार्मेसी तेश्रो वर्षमा अध्ययनरत छिन् ।)
बालबालिकाको भविष्यप्रति चिन्तित बन्ने कि ?
— सुष्मा सुब्बा लामा विश्वव्यापी महामारीको रूप लिएको कोरोना भाइरस कोभिड १९ को सन्त्रास अब ...
जातजातिका नाममा सधैं दुश्मनी किन ?
लक्ष्मी पौडेल नेपालमा कहिलेकाँही जातजाति र भाषाभाषीको नाममा द्धन्द्ध हुने गरेको छ । तँ ठूलो ...
गोविन्द बोहोरा ‘ब्रम्हाण्ड’ वि.सं २००७ साल पछिदेखि आजसम्मको राजनीतिक घटनाक्रम जसरी ...
राकेश सुकुपायो हाम्रो शिक्षा प्रणाली जीवन जिउने, प्रकृतीसंग रमाउने, व्यवहार परिवर्तन ...
आफ्नै भूमि सार्वजनिक गर्दा भारत किन हतोत्साहित ?
शत्रु गुञ्जा अहिले हरेक दिनको समाचार बनिरहेको घटना हो सिमाना कोरोना भन्दा पनि खतरनाक ...
लकडाउन डायरीः सरकारको नियम पालना गरौ कि सहकारी संस्थाको ?
रेणु त्वानाबासु् लकडाउनको समय कही जानु हुर्दैन । वाहिर त झन जानु नै भएन । त्यसैले जमुना घरमै ...
– खेम थपलिया गोठको हराएको बाख्राको पाठो फेला पार्दा तमान्छे कति खुसी हुन्छ भने गुमेको ...
यज्ञबहादुर काकी हो, सपना देख्नको लागि निदाउनुपर्छ । धेरै दिनदेखि न निदाएको मानिसलाई निन्द्रा ...
कोभिड–१९, बैदेशिक रोजगार र सरकारको नीति तथा कार्यक्रम
डिक बहादुर खत्री (कुमार) २३ अर्व भन्दा बढीको लगानी, ४२ लाख भन्दा बढी बेरोजगार युवा– ...
‘हिमचितुवा’ निधनबाट राष्ट्रपतिद्वारा दुःख व्यक्त
गभर्नर लम्साललाई बधाई तथा शुभकामना
लकडाउनमा ‘हिरो’ बने कुँवर रक्तदानसँगै राहत वितरणलाई पनि निरन्तरता दिँदै
आज उपत्यकामा थपिए ७११ संक्रमित
पहिरो पिडितलाई रास्ट्रिय युवा संघ नेपालको राहत सहयोग
विदेशको तुलनामा नेपालको क्वालिटी अझै पछाडि नै छः सरोज थापा
महामन्त्री कोइराला अस्पतालबाट ‘डिस्चार्ज’
जनअपेक्षा छिट्टै पूरा हुनेछन्ः प्रचण्ड